Ibonwe kangaphi 1,312 (Ama)Ixesha #Ukuthobela
Imikhwa Emibi Iyazonakalisa Iingqondo Zethu Kwaye Isikhokelele Kwintshabalalo Ekupheleni
Kufanele sifunde izifundo kwimizekelo kaKumkani uSawule, uHofeni noPinehas, kuba amakhaya abo atshatyalaliswayo ngenxa yemikhuba yabo emibi yokungathobeli amazwi kaThixo, ukuze sibe nokwazi ukohlukana nayo imikhwa yethu emibi, ze sakhe imikhwa elungileyo yokuthobela ilizwi likaThixo.
Kufuneka Siziqhelanise Nokuthobela Amazwi kaThixo NjengoSamuweli noDavide, Ukuze Samkele Iintsikelelo zikaThixo
Amalungu eBandla likaThixo ahlonela uKristu uAhnsahnghong noThixo uMama abeze njengaBasindisi kweli lixa, ngexa enemikhwa elungileyo ebakhokelela eZulwini, babelane ngamazwi kaThixo amanzi obomi asindisa ihlabathi.
“ Ndathetha nawe uchulumachile;
wathi wena, Andiyi kuva.
Yindlela yakho leyo kwasebuncinaneni bakho, ukuba ungaliphulaphuli ilizwi lam.”
Amharic Bengali Bulgarian Burmese English Filipino French German Greek Hindi Indonesian Japanese Kannada Khasi Khmer Korean Lao Malay Mongolian Nepali Portuguese Romanian Russian Chinese Sinhala Spanish Swahili Tamil Telugu Thai Chinese-T Urdu Vietnamese Xhosa
Indlela eya eZulwini I